Toerana izay fantatra fa isehoan’ny filokàna an-kalamanjana.Tamin’ny fotoana nahatongavan’ny polisy teny an-toerana dia lehilahy miisa 20 mbola teo am-pilokana no voasambotra avy hatrany.
Fantatra fa ny toerana nahatrarana azy ireo dia fieren-jiolahy ary efa mampitaraina ny mponina manodidina noho ny tabataba sy ny teny ratsy ary efa matetika no hitrangana fandravana fananan’olona eny amin’ny manodidina noho ny herisetra vokatry ny hamamoana sy fahalanian’ny vola tamin’ny loka. Nentina nanaovana fizahana ny mombamomba azy ireto voasambotra ireto sao misy efa nanan-draharaha na karohina eo anivon’ny polisim-pirenena.
Ho fisorohana ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina no anton’ny fanentanana nandritra ny volana vitsy tao amin’ny renivohitry ny faritra Atsinanana hiadiana amin’ny filokana an-kalamanjana ny polisy any an-toerana. Taorian’ny fanentanana anefa, tsikaritra fa mbola misy minia manao izany ihany amin’ny toerana sasany ka izao niroso tamin’ny fandraisana andraikitra izao ny mpitandro filaminana.